सवारी साधनको उपयोग गर – News Portal
December 13, 2019 epradeshLeaveaComment on सवारी साधनको उपयोग गर
प्राय सबै कार्यालयमा रहेका ग्यारेजहरूमा केही पुराना गाडीहरू थन्किएका छन् । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा यो अवस्था छ ।
सामान्य समस्यामा थन्किएका सवारीका साधनहरू मर्मत गरेर उपयोग गर्नेभन्दा पनि बिग्रिन लागेको बहानामा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने संस्कारको विकास हुन थालेपछि चल्दा चल्दैका गाडीहरू थन्काइनु र कवाडमा मिसाउने कार्यले राज्यको अर्बाै रकम खेर गएको र गुमेको छ ।
सहज रूपमा र सामान्य मर्मतमा प्रयोग गर्न सकिने सवारी साधन भएपनि मर्मत गर्नुको साटो कवाडमा थन्काउनुले सम्बन्धित पक्षहरूको लापरवाही र राज्यको सम्पत्तिको दुरूपयोग मान्न सकिन्छ ।
यस्तो गरिनु सरोकारवाला पक्षको कमजोरी नै हो । सानादेखि ठूला र अत्याधुनिक प्रवृत्तिका सवारी साधनहरू पनि अहिले प्रयोगमा ल्याइएको छैन । तत्कालिन अवस्थाको संरचना अनुसार प्रयोग भएको सवारी साधनहरू धेरै नै अहिले प्रयोगमा छैनन् ।
देशमा नयाँ संरचना खडा भयो । जिल्लास्थित कार्यालयहरू कति कामविहीन अवस्थामा रहे ? कतिको संरचना फेरियो ? कति स्थानान्तरण भए ? तर तिनले उपयोग र प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधनहरू प्रयोग हुन सकेनन् ।
सम्बन्धित कार्यालयको पार्किङ स्थलमा नै रहे जुन अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । यो अवस्था आउनु राम्रो पक्ष हैन । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधामा पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन नै छ । त्यो पनि नयाँ सकभर आफैले खरिद गरेको अरू चढेको र पुरानो सवारी साधन प्रायः प्रयोग भएको पाइदैन ।
यसले पनि पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आएका सवारी साधनहरू अहिले उपयोग नभएको देखिएका हुन् । करोडौ रकम खर्च गरेर सुविधा सम्पन्न सवारीका साधनहरू खरिद गर्नुभन्दा ती सवारी साधनहरूको सामान्य मर्मतबाट सञ्चालन गर्नसकेमा राज्यको ढुकुटी अर्काे ठाउँमा प्रयोग हुने थियो । यसतर्फ पनि सोच्न सके जनताको करको समेत सही सदुपयोग हुने देखिन्छ ।
अहिले स्थानीय तहका कार्यालयमा हेर्ने हो भने कुनै न कुनै बिग्रिएको भन्दै सवारी साधनहरू थन्काइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा दशवटा बढी बिग्रिएका मोटरसाईकल थन्किएका छन् । त्यसैगरी तीनवटा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, शाखा अधिकृत चढ्ने बलेरो गाडी थन्किएको छ ।
त्यसैगरी प्राविधिक तथा कर्मचारीहरू चढ्ने मोटरसाईकल पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ । यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ती उपकरणहरू मर्मत र सम्भार गर्न सकिने अहिले पनि उपयोग र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ र तर त्यतातिर कसैको पनि सोंच जान सकेको छैन । त्यस्ता सवारी साधनहरू उपयोग गर्ने र गराउनेतर्फ सबैले सोच्न आवश्यक छ ।
December 10, 2018 epradesh